Technology Archives - Page4of4- Lifestyle Myanmar
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အသုဘချဖို့ကို စက်ရုပ်က ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသုဘတစ်ခုတွင် ဘုန်းတော်ကြီး/ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးအစား စက်ရုပ်ကို အစားထိုးအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒီစက်ရုပ်ကို PEPPER လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စက်ရုပ်တွေကို စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဆေးရုံများ စတဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအလုပ်များလဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ယခုအခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသုဘ တစ်ခုမှာ ဘုန်းတော်ကြီး/ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးနေရာမှာ အဆိုပါ စက်ရုပ်က...
လေးစားအားကျစရာကောင်းတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ အမှိုက်သိမ်းနည်းစနစ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ နည်းပညာ(ရုပ်သံ)
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် အမှိုက်ဆိုတာ လမ်းဘေးမှာပဲ အမှိုက်ပုံးနဲ့ထားကြတာများပါတယ်။ ဒါက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဒီလိုလူသွားလူလာများတဲ့နေရာမျိုးမှာအမှိုက်ပုံးထားပေးတဲ့အခါ လမ်းသွားလမ်းလာတွေအတွက် အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ထွက်ပြီး ကျန်းမာရေးအရလည်း ညီညွှတ်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကတော့ဒါပြဿနာကို အကောင်းဆုံး နည်းစနစ်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ https://youtu.be/LA9FsJXU66w လူနေထူထပ်တဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ လူဦးရေတိုးပွာလာတာနဲ့အမျှ စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေက ပိုမိုများသထက် များလာပါတယ်။ ဒီအမှိုက်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်Swiss ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကနေတာဝန်ယူပြီး မြေအောက်အမှိုက်သိုလှောင်းရေးစနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အဆင့်မြင့်မြေအောက်အမှိုက်သိုလှောင်ရေးစနစ်ဟာ...
Google ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ Larry page က နောက်ဆုံးပေါ် တစ်ယောက်စီးလေယာဉ်ကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်ဟာ မောင်းနှင်ရလွယ်ကူပြီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်း မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ရေပြင်အထက် ၃ပေကနေ ၁၀ အတွင်းပျံသန်းနိုင်ပြီးမိနစ် ၂၀ကို မိုင် ၂၀နှုန်း ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ပြီး ထိုင်ခုံတစ်ခုံနဲ့ တစ်ယောက်စီးယာဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကို ကြိုတင်မှာယူလို့ရရှိပေမဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ လူသိရှင်ကြား...
အိမ်ရှေ့င်္စမင်းသားလေးရဲ့ ကြင်ယာတော်ရွေးချယ်ပွဲမှာ သုသုကိုရွေးချယ်သွားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာလဲ
အိမ်ရှေ့င်္စမင်းသားလေးရဲ့ ကြင်ယာတော်ရွေးချယ်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ သုသုတစ်ယောက် အားငယ်နေပြီး သူမရဲ့အလှကို ယုံကြည်မှုရှိပေမယ့်လည်း ဓါတ်ပုံကနေတဆင့် မင်းသားလေးကရွေးချယ်မှာဆိုတော့ အမှန်တကယ် စိုးရိမ်နေမိတာပါ။ ဒါပေမယ့် မင်းသားလေးနဲ့ဆုံဆည်းဖို့ မြားနတ်မောင်က သူမဖက်ကကူညီပေးလို့ မင်းသားလေးရဲ့ အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်??။ မင်းသားလေးနဲ့ မင်းသမီးလေးကို ဖူးစာဆုံအောင် အောင်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ မြားနတ်မောင်က ဘယ်သူလို့ထင်လဲ။☺️? မင်းသမီးလေးရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက် မျက်နှာပေါ်က facial recognition အမှတ်ပေါင်း ၂၉၆...